Online ကိုအသုံးပြုပြီး အလုပ်ရှာဖွေသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက် ﻿
Online ကိုအသုံးပြုပြီး အလုပ်ရှာဖွေသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
သတင်းအချက်အလက် နဲ့ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လုပ်ငန်းတွေပိုမိုတွင်ကျယ်မြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လာ ကြပါပြီ။ မြားပြားလှတဲ့အလုပ်တာဝန်များ နဲ့ ပြည့်နှက်နေသူတွေ အဖို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို အချိန်တိုတို အတွင်းမှာအဆင်ပြေဆုံး လျှောက်ထားမှုတွေပြု နိုင်အောင် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြု လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ jobsinyangon.com အင်တာနက်စာမျက်နှာ လေးရဲ့ အကျိူးပြု ပုံလေးကို ရေးသားတင်ပြ လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
၁. အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း မှာပိုပြီး ကောင်းမွန်မြန်ဆန်စေပါတယ်
အလုပ်လျှောက်လွှာနဲ့ ဆက်စပ်သောစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုင်တွယ်စုဆောင်းထိန်းသိမ်းရတဲ့ အချိန်ကို လျှော့ချနိုင် ပါတယ်။ အလုပ်ခန့်အပ်သော မန်နေဂျာများ ကိုသူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက် တွေ နဲ့ နည်းပညာ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပံ့ပိုး ပေးထားပါတယ်။ အလုပ်ရှာသူများ အနေနဲ့လည်း အလုပ်လျှောက် လွှာတစ်ကြိမ်တင် ထားရင်ဘဲ နောင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ အလုပ်လျှောက်ထား ရာမှာမိမိတို့ရဲ့ တင် ထားပြီးသားလျှောက်လွှာကိုပြန် လည်ရွေးချယ် ပေးရုံနဲ့ဘဲအဆင်ပြေစွာလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။
၀န်ထမ်းရှာဖွေသူများအတွက် လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအချက်လက်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင် ပြီး မိမိတို့ ရဲ့အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနည်း ပုံစံတွေအလိုက်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို ထိရောက်စွာ သက်သာစေမှာပါ။ အလုပ်ရှာဖွေသူ ၀န်ထမ်းများ အတွက်လည်း လျှောက်လွှာတင်ရန် သွားရောက်ရမဲ့ ခရီးစးရိတ်များနဲ့အချိန်ကို လစ်ဟင်းခြင်း မရှိ စေပဲ လျှောက်လွှာတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လျှောက်ထားသူများ အတွက် မိမိတို့ရဲ့အလုပ် လျှောက်လွှာများကို Jobsinyangon.com မှ လွယ်ကူ စွာရေးသားဖန်တီးနိုင်အောင် စီမံထားရှိပေးပါတယ်။ ၀န်ထမ်းခန့်အပ်သူများမှလည်း အလုပ်ခန့်ခြင်း များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်ဖော်ပြထားရှိတဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာများကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ၀န်ထမ်းခန့်အပ်သူများ အတွက်ပါ တိကျမြန်ဆန်စွာရှာဖွေ နိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ပေးထားလို့ မိမိတို့လိုအပ်နေသော ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းများကို အချိန်တို အတွင်းမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေ သူများအတွက်ကို လည်းမိမိတို့ရဲ့လျှောက်ထား လိုတဲ့ ရာထူးနေရာ အလိုက် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရှာဖွေနိုင်ပြီးလျှာက်ထားနိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိတာမို့ အလုပ်ရှင် နဲ့ ၀န်ထမ်းများ ကြားမှာ ကြန့်ကြာ မှုတွေအဖြစ်စေဘဲ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းကိုပြီးမြောက်စေမှာပါ။
၅. ကုမ္ပဏီများ မှမိမိတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းကိစ္စ မှာ တွင်ကျယ်စေနိုင်ပါတယ်
HR ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ကိုတိုးတက်တွင်ကျယ်စေပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ ရဲ့အာရုံကို စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အလုပ်ခေါ်သူ များအဖြစ် HR ကိုတည်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ခေါ်သူနဲ့ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ အကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် နိုင်စေဖို့စီစဉ်ထားရှိပြီး အလုပ်ခေါ်သူများ နှင့် အလုပ်လျှောက်ထားသူများ အတွက် jobsinyangon.com မှ Blog စာမျက်နှာများ၊FaceBook စာမျက်နှာများနဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်း အချက်အလက်တွေကို သိရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။
JobsInYangon ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေကြပါစေ . . .